Sahitya – Page7– सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
झर्रोटर्रो : अरिङ्गालको कथा
हिजोआजको मौसम अरिङ्गालले साम्राज्य फैलाउने मौसम हो । यो बर्खाका महिनामा अरिङ्गालले जताततै गोलो लाउने गर्च । जङ्गलका ठूल्ठूला रुखका हाँगाहरूमा ठूल्ठूला गोलो बनाएर अरिङ्गालले आफ्ना सन्तान फैलाउँच । यसरी फैलिएका अरिङ्गालले किसानका खेतबारी, घरआँगन, करेसाबारी, बगैँचा जताततै साम्राज्य फैलाएर मनुखे जगतमा आतङ्क मच्चाउँच । किसानले खेती गरेका मकैका घोगामा दुलो पारेर खाइदिने, मकैबारीमा मनुखे […]
झर्रोटर्रो : दुई नम्बरीको दुई तीर्थाटन
एक समयमा पद र पावरमा एक नम्बरी बनेर निकै शक्तिशाली सुप्रिमो बनेका पिके अहिले पावर र पदमा दुईनम्बरी बनेका छन् । यससँगै अब उनको नाउँ पनि बदलिएर मिस्टर दुईनम्बरी बनेको छ । पद त उनको दुईनम्बरी छ नै, पावर भने टुकी बालेर भुइँमा कतै खोज्नु पर्ने अवस्था छ । जतिबेला उनी पद र पावरमा विराजमान […]
Posted in: २०७४–चुनाव, Bichar, Sahitya, Uncategorized
दम्भ, दावत, दक्षिणा र दरिद्रता
यी ‘द’ प्रारम्भिक शब्दहरु खोजेर र बलपूर्व मिलाएर ध्वनि वा सुन्दरता दिन खोजेको होइन । यिनीहरु आआफ्नो पारस्परिक सम्बन्ध र गहनता लिएर लाम मिलेर बस्न आएका हुन् । दावत शब्द सजातीय आभाषित नभएर पनि यो अरुसित रक्तसम्बन्ध नभएको भने होइन । यिनीहरु कुन उद्देश्यको पुष्टि प्रमाण र व्याख्याको निमित्त यसरी साथसाथै आए त ? म […]
Posted in: २०७४–चुनाव, Jiwan saili, mainNews, Sahitya
जनवादी क्रान्तिको क्यानभासमा छोरीको संझना
छोरीको मृत्युको खबरले म अत्यन्त मर्माहत भएको थिएँ । लामो समयपछि घर फर्कंदा बाटामै सुन्न नचाहँदा नचाहँदै अचानक एक महिलाले सो खबर सुनाइन् । म एक युद्ध यात्री । क्रान्तिकारीहरुको नजरमा एक क्रान्तिकारी योद्धा, सक्षम कार्यकर्ता । प्रतिक्रियावादीहरुका लागि एक खुंखार आतंककारी । त्यसैले कामको चाप र व्यस्तताले पनि र क्रान्तिकारी दायित्वले पनि मेरो घर […]
Posted in: mainNews, Sahitya, फ्लयास ब्याक
बदलिंदो तीज र शिवम् त्रिनेत्र
काठमाडौं । यो वर्षको तीज पनि निकै गहना गुरिया र सिंगार पटारले ढाकेको छ । चेलीहरु आफ्ना आर्थिक गच्छे अनुसार प्रस्तुत भएका छन् । कोही गाउँको रहनसहन र भेषभूषामा, कोही छोटे सहरीया त कोही बडे सहरियाका आर्थिक हैसियत र त्यसको प्रदर्शनमा देखिएका छन् । नेपालमा अहिले तीजलाई तीन फरक शिवम् त्रिनेत्र (दृष्टिकोण) बाट हेरिएको पाइन्छ […]
Posted in: २०७४–चुनाव, Kaliwood, mainNews, Manoranjan, Rochak, Sahitya
‘हामी पनि छौं’ : जर्मनीमा जातिवादविरोधी कन्सर्ट
काठमाडौं । जर्मनीमा आयोजित एक जातिवाद विरोधी कन्सर्टमा ६५ हजार मानिसहरुले भाग लिएका छन् । थोरै मानिसहरुले मात्र भाग लिने ठानिएको उक्त कन्सर्टमा यति ठूलो उपस्थिति ऐतिहासिक नै थियो । एक आप्रवासीले चक्कु प्रहार गरेर स्थानीय जर्मनको हत्या गरेपछि चरम दक्षिणपन्थीहरुले ‘हामी मानिस हौं’ भनेर नारा, जुलुश र प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसपछि जातियताको आगो […]
Posted in: International News, mainNews, Sahitya
दोस्रो विश्वयुद्ध थेगेको लेनिनग्रादको युद्ध संग्राहलय
त्यो दिन हामी बिहानै उठ्यौं । जुन लेनिनग्रादमा रहेको युद्ध म्युजियममा जानु थियो । अघिल्लो दिन साँझ क. दिमित्रीले भन्नु भएको थियो, “भोली हामी क. स्टालिनकालिन समयमा हिटलरी नाजीवादलाई धुलो चटाएका हतियारहरुको म्युजियम हेर्न जाने छौं ।” मलाई ज्यादै खुल्दुली लागिरहेको थियो, त्यो म्युजियम छिटै हेर्नका लागि । साँझ सुत्ने समय आयो । बिस्तारामा पल्टें […]
Posted in: २०७४–चुनाव, mainNews, Sahitya, फ्लयास ब्याक
झर्रोटर्रो : बाई मिस्टेक काठमान्डु घोप
अस्तिको हिजो र हिजोको हिजो यानेकि बिहीबार र शुक्रबार नेपाल मण्डलको राजधानी खाल्टोमा बङ्गालको खाडीवाला मण्डलहरूको पिकनिक सम्मेलन भयो । त्यसलाई उनीहरूले बिमिस्टेक सम्मेलनको नाउँ दिए । यो विमिस्टेक सङ्गठनको ढेँडु मुखिया थियो नेपाल मण्डलको सरकार । मिस्टर उखानप्रसाद नै यो सङ्गठनका प्रमुख मुखिया थिए । नेपाल मण्डल र अरू छ वटा मण्डलका सरकार र […]
Posted in: २०७४–चुनाव, Bichar, Sahitya
जलजला पत्रिकामा स्वतन्त्र क्रान्तिकारी हुँदा ! हामी हामीले भर्खरै जलजला पत्रिका निकाल्न सुरु गरेका थियौं । कामको आवश्यकताले आवश्यक जनशक्ति, क्षमता, प्रविधि, सरसामान र वातावरण बनाउँदो रहेछ । साथीहरु जम्मा पनि भयौं । ईशवर ज्ञवालीसँग २०५६ सालदेखि नै भेटघाट भएको थिथयो । पत्रिका कस्तो बनाउने र कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा उहाँले लेख्नुहुन्थ्यो । डिल्ली बजारमा […]
Posted in: Sahitya, फ्लयास ब्याक
कवि सेनलाई पत्र
श्रद्धेय कवि सेनजी हार्दिक अभिवादन ! अहिले त गाथमा ठीकै छ भन्ने लागेको छ त्यता त हाम्रो यताको जस्तो बेइमानी र धोखाधडी छैन होला कवि सेनजी तपाईं–हामीले हिजो मुक्ति अभियानमा लाग्दा बगाएको पसिना र रगत त त्यसै खेर गए जस्तो छ बालुवामा पानी सिँचाइ गरेजस्तै भएको छ । निरङ्कुशताका सयौं बुटले निर्मममता साथ कुल्चिँदा पनि […]
Posted in: Sahitya